Maxaa ku soo kordhay xiisadda siyaasadeed ee Baladweyne? | KEYDMEDIA ENGLISH
Maxaa ku soo kordhay xiisadda siyaasadeed ee Baladweyne?
KON, oo ahayd, warbaahintii ugu horreysay ee baahisa, xogaha la xariira khilaafkaan, ayaa fahansan, in is-qabqabsiga, labada daraf, uu saameyn ku yeeshay Guddiga doorashooyinka, kuwaas oo la kala saftay dhinacyada.
BALADWEYNE, Soomaaliya – Warar is khilaafsan ayaa ka soo baxaya xaaladda siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay, magaalada Baladweyne ee xurunta gobolka Hiiraan, halkaasoo uu ku taagan yahay, khilaaf ka dhashay, doorashada 11 kursi, oo tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka JFS.
Daqiiqado ka hor, waxaa si weyn baraha bulshada loogu baahiyay, war sheegaya in MW Hirshabeelle, Cali Guudlaawe Xuseen, laga hor istaagay, socdaal, uu maanta ku tagi lahaa Jowhar, kadib cadaasis ciidan oo ka yimid, dhanka Madaxweyne ku xigenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed.
Hayeeshee, Howlwadeenno, ka tirsan xaafiiska Cali Guudlaawe, oo ay la xariirtay, Keydmedia Online, ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay, wararka sheegaya xayiraadda Madaxweynaha, waxayna beeniyeen inuu saaka safar u ahaa xurunta maamul gobolledka Hirshabeelle ee Jowhar, .
Khilaafka, labada xaafiis ee ugu sarreeya maamulkaas, ayaa salka ku haya, kala argati duwanaan, ku aaddan, hannaanka loo marayo qabashada doorashada, kuraasta taalla Hiiraan, Guudlaawe, ayaa doonaya daahfurnaan, halka Dabageed, qorsheeyay in shaqsiyaad gaar ah loo xiro kuraasta.
KON, oo ahayd, warbaahintii ugu horreysay ee baahisa, xogaha la xariira khilaafkaan, ayaa fahansan, in is-qabqabsiga, labada daraf, uu saameyn ku yeeshay Guddiga doorashooyinka, kuwaas oo la kala saftay dhinacyada, xilli ay saameyn xooggan guddiga ku dhex leedahay Madaxtooyada Soomaaliya.
Khilaafku, wuxuu sidoo kale, sababay in dib loo dhigo, doorashada 11 kursi oo jadwalkooda la shaaciyay todobo maalin ka hor, isla-markaana, qorshuhu ahaa, in la doorto, shalay iyo maanta, [Talaado iyo Arbaco] kadib muran ka dhashay, soo gudbinta Guddigu Xulista ergada wax dooraneysa.
Guddiga Doorashoada Hirshabelle (SEIT), ayaa sidoo kale, sheegay in la hakiyay Guddiga Xulista Erdada ee loo diiwaangeliyay, kuraasta HOP#010 & HOP#066, kadib cabsho ka timid, odayaasha dhaqanka Iyo murashixiinta kuraasta, oo ay ka mid yihiin Xildhibaan Jindi, iyo Cumar Waasuge.
Kuraasta, doorashadooda la isku heysto, waa kuwa ugu misaanka culus kuraasta taalla Hiiraan, sida; HOP063, ee uu ku fadhiyay Goodax Barre, HOP010 Cabdirisaaq JINDI, HOP011 Cabdirisaq Cumar iyo HOP030 Daahir Jeesow, halka, Sanbalooshe, uu ku jiro musharixiinta kuraas raadiska ah.
Isku dayga Yuusuf Dabageed, ku doonayo, boobka kuraasta, ayaa durba sababay, gacan ka hadal, waxaana iska hor imaad kooban shalay ka dhacay Baladweyne kaas oo sababay, dhimashada ugu yaraan shan ruux. Ciidamo, taabacsan musharixiinta oo aad u badan iyo kuwo la socda Dabageed, ayaa ku sugan magaalada.
Guulaawe, ayaa hore ula kulmay, ku dhawaad 50 musharrax oo u baratamaya 11 kursi, wuxuuna ku wargaliyay, in uusan jiri doonin kursi loo xirayo ruux gaar ah, hayeeshee, Villa Somalia, oo adeegsaneysa Dabageed, ayaa caqabd ku ah qabashada doorasho, ka dhacda xurunta gobolka Hiiraan ee Baladweyne.
Kaliya lix maalmood, ayaa ka dhiman, xilligii loogu tala galay, in la soo af-meero, doorashada kuraasta baarlamaanka 11-aad ee JFS, taas oo ku eg 15 Murch 2022, xilli uu sii siyaadayo, cadaadiska caalamiga ah ee ka imaanaya, dalalka reer galbeedka iyo hay’adaha dhaqaalaha.